Nkwenye na afọ iri na ụma | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ: Ịhụnanya, Mmekọahụ na Intanet
Home Iwu Nkwenye na ndị nọ n'afọ iri na ụma
Okwu banyere nkwenye maka inwe mmekọahụ na ndị na-eto eto dị mgbagwoju anya.
Afọ nkwenye na ụdị ọ bụla nke mmekorita bụ 16 maka ma ndị nwoke ma ndị nwanyị, nke mere na inwe mmekọahụ n'etiti okenye na onye n'okpuru 16 bụ mmejọ iwu. Afọ nke nkwenye bụ otu ihe ahụ n'agbanyeghị okike ma ọ bụ inwe mmekọahụ.
Mmekorita nwoke na nwanyị (XIUMX-13) na mmekorita nke ozo n'etiti ndi na-eto eto 15-16 bu kwa mmejọ, obuna ma ha abua kwere. Nchedo nwere ike ịbụ na otu n'ime ndị mmekọ ahụ kwenyere na onye nke ọzọ bụ XNUMX agadi ma ọ bụ karịa.
E nwere ihe nchedo dị mma ma ọ bụrụ na inwe mmekọahụ anaghị agụnye mmekọahụ ma ọ bụ okwu ọnụ. Ndị a bụ ma ọ bụrụ na onye okenye ahụ kweere na onye na-eto eto ga-abụ 16 agadi ma ọ bụ karịa ma ebugobeghị ya ebubo yiri nke a, ma ọ bụ afọ nke dịkarịrị ala karịa afọ abụọ.
Ntuziaka sitere na Gọọmenti Scotland kwetara na ọ bụghị ọnọdụ ọ bụla nke mmekorita nwoke na nwanyị n'okpuru-16 ga-enwe nchekasị nchebe ụmụaka, mana ndị na-eto eto ka nwere ike ịnakwere nkwado maka mmekọrịta ha na mmekọ mmekọrịta ha.
Nke a bụ obere video banyere nkwenye n'ihe metụtara mmekọahụ. Enwere ike iji ya mepee mkparịta ụka gbasara isiokwu a dị mkpa. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị chere na mkparịta ụka banyere mmekọahụ kwesịrị ịbụ maka naanị ndị nne na nna, enwere ọrụ bara uru maka ụlọ akwụkwọ ka ha rụọ ọkachasị n'ịkụzi sayensị n'azụ mmetụta nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ. Ndi nne na nna kwesiri iguzogide oso nke ihe a ma soro umu ha kparita uka. Ndi nne na nna bu ndi nlere-anya na ndi nwere ikike na ndu nwata obula, agbanyeghi ka ha nupu isi.
Nkwenye maka mmekorita nwoke na nwanyi bu ihe siri ike, karia n'etiti ndi ntorobia na ndi ntorobia. Onye ọ bụla na-ekwu banyere mmekọahụ na ọtụtụ na-asọmpụta ibe ha iji hụ onye ga-ebu ụzọ na-agbalị ọrụ ọhụrụ. Ịnweta ikiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ site na smartphones na mbadamba pụtara na ndị na-eto eto na-amụta banyere mmekọahụ na 'ịhụnanya' site na ndị na-eme egwuregwu porn n'ụzọ dịka ọtụtụ ndị nne na nna ga-ahụ ihe jọgburu onwe ya. Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ taa abụghị ihe dị nro Ụdị Playboy-ụdị nke gara aga. Ime ihe ike, mwakpo na mwakpo mmekọahụ megide ụmụ nwanyị ma ọ bụ ụmụ nwoke na-eme nwanyị bụ ụkpụrụ na opekata mpe 90% nke vidiyo na-enweghị ohere. Ikiri ihe a kwa ụbọchị ruo ọtụtụ afọ tupu gị na onye dị adị na-akpakọrịta nwere ike ime ka nghọta nwata, nwoke ma ọ bụ nwanyị, nwee nchekwa, ịhụnanya, mmekọrịta nwoke na nwanyị.
Girls achọ ka a masị gị, hụ na ị na-enwe mmekọahụ na-adọrọ mmasị ma na-emekarị ka ọ bụrụ ịhụnanya. Nke a apụtaghị na ha dị njikere inwe mmekọahụ. Naanị ha na-amụta otú ha ga-esi edozi ahụ ha na-enwe mmekọahụ. Ka ha na-eme ihe ma na-agbalị ịkpa àgwà na àgwà ndị ọhụrụ, ha nwere ike iyi ka ụmụaka na-eme ihere. Ịmụ banyere ókèala na imehie ihe bụ akụkụ dị mma nke ịmụta banyere nkwurịta okwu. Otu nwata nwanyị 16 dị afọ,
"Amaghị m ihe m chọrọ. Naanị m ga-achọ ka m nwee mmasị ... Achọrọ m ịnwale ihe onye ọ bụla na-ekwu ma kwuo na ha na-eme ya. "
O kwukwara na a kpaliri ya ịkwa iko nke ọ kwara ụta mgbe emechara. O choghi ka ihere me ya dika okwesiri. Ọtụtụ ụmụ agbọghọ chere na ọ bụ “ihe nzuzu” ịkwụsị nwata nwoke mgbe ha bidoro 'ịbịaru onye ọ bụla nso.' Womenmụ nwanyị nọ n'afọ ndụ niile kwesịrị ịmụ otu esi ekwenye ekwenye ma gosipụta ókèala doro anya banyere ihe dị ha mma ịme.
Boys N'aka nke ọzọ nwere ikike inwe ike mmekọahụ a dị ike na ha chọrọ ịnwale ụgbọala na onye òtù ọlụlụ. Ha chọkwara ka a hụ ha dị ka ụmụ nwoke ndị ọzọ. Ha nwere ike kpebisie ike ma nwee otu obi maka iru ihe mgbaru ọsọ ndị ahụ. Iguzosi ike n'ihe nye nwoke nwoke na-abụkarị ihe siri ike karịa ọchịchọ nke ijikọ nkekọ ma ọ bụ ịlụ nwa agbọghọ. Naanị ha na-amụta ịchịkwa ụdị mmekọahụ ahụ dị na ahụ ha. Ha na-adịkarị mfe imebi ihe na-ezighị ezi banyere ihe onye ọlụlụ na-ekwenye.
Ya mere, ebe ozu nwere ike ịgbanwere ike, amaghị ihe, ihe gbasara mmekọahụ, ọ pụtaghị na onye ọ bụla dị njikere isoro nwoke na nwanyi nwee mmekọahụ na otu. Ma ọ bụghị mgbe niile bụ nwoke bụ onye kachasị ike, ọtụtụ ndị inyom na-ebute ụzọ n'ịmalite ịkwa iko. Nke a bụ ebe okwu siri ike nke nkwenye, nwara ịbe nwoke n'ike ma dinaa n'ike n'ike.
Ịkụziri ndị na-eto eto gbasara nkwurịta okwu na ọnọdụ dị mma bụ isi ihe dị mkpa iji mee ka mmekọrịta nwoke na nwanyị nwee ahụ ike.